छिमेकीसँग यौन सम्बन्ध राखिरहेको भेटेपछि श्रीमानले श्रीमतीको टाउको छिनाएर बोक्दै दिनभरी गाउँ डुले ! – Sanjal Nepal
Homeसमाचारछिमेकीसँग यौन सम्बन्ध राखिरहेको भेटेपछि श्रीमानले श्रीमतीको टाउको छिनाएर बोक्दै दिनभरी गाउँ डुले !
छिमेकीसँग यौन सम्बन्ध राखिरहेको भेटेपछि श्रीमानले श्रीमतीको टाउको छिनाएर बोक्दै दिनभरी गाउँ डुले !
November 3, 2020 admin समाचार 5737
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा अहिले अ’नैतिक स’म्बन्धको खबर निकै चर्चामा रहेको छ । परपुरुष वा परस्त्रीसँग लाग्ने दम्पतीहरुको संख्या हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ । तर यो एकदम भयानक हुन्छ भन्ने कुरा आज हामी जानकारी दिन गइरहेका छौँ ।
भारत, लखनऊको बाराबन्कीमा आज भन्दा झण्डै ६ वर्ष पहिले भएको एक घटना सबैका लागि चेतावनी हुनसक्छ । त्यहाँको देवा थाना क्षेत्रको माविया गाउँमा एक जना व्यक्तिले आफ्नी श्रीमतीको शिर हटाएका थिए । उनले त्यो मात्रै गरेनन् उक्त हटाएको टाउको लिएर लामो समय गाउँमा घुमेका पनि थिए । उनले आफ्नी श्रीमतीलाई गाउँका एक युवकसँग अ’नैतिक स’म्बन्ध राखेको देखेका थिए ।
आरोपित पति मनिरामले आफ्नी श्रीमती सुमनको टाउको छुट्याएर अलग गरेका थिए । आरोपित लामो समयसम्म हातमा उक्त टाउको लिएर गाउँमा घुमेका पनि थिए । जब गाउँलेहरूले यो दृश्य देखे, मानिसहरू डराएर भाग्न थालेका थिए भनेर दैनिक भास्करले लेखेको छ ।
पति मनिरामका अनुसार उनकी श्रीमती सुमनको गाउँकै एक युवकसँग अ’नैतिक स’म्बन्ध थियो । यसका लागि आरोपीले आफ्नी पत्नीलाई धेरै चोटि समझाउन खोजेको पनि थिए । तर सम्झाएको अर्को राती आफ्नो लोग्नेलाई छोडेर श्रीमती गाउँका प्रेमीकहाँ गइन् । यो देखेर रिसाएर पतिले घरमा राखिएको घरेलु सामानले टाउको अलग गराएका थिए ।
अरुसंग नसल्कियोस भनेर बुढीले आफ्नै बुढाको पाइन्टमा ताला लगाइदिए
ड्राईभर भाई सुजनले बस चलाउँदा चलाउँदै यति राम्री प्रेमिका पाए । बसमै देखेर लभ पर्यो, केटी भन्छिन्- बोली र बानी मन पर्यो (भिडियो हेर्नुस)
श्रीमतीलाई क्यान्सर भएको थाहा पाएपछि श्रीमान् फरार कोमला रुदै जीवनको भिक्माग्दै छिन्,!
January 5, 2021 admin समाचार 2119
भिडियो समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ पुरा समाचार हेर्नुहोस !अब वर्षौं पुराना लाइसेन्स नवीकरण नगरिने काठमाडौं । किशोरप्रसाद पौडेलले २५ वर्षअघि लिएको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) पटक-पटक नवीकरण गरिसके । पछिल्लो पटक उनले ८ कात्तिक
December 3, 2020 admin समाचार 4357
काठमाडौ । आफ्नो श्रीमतीले धोका दिएको र भएको सम्पति लिएर फरार भएको भन्दै एक युवक मिडियामा आएका छन । काठमाडौ बुढानिलकण्ठ बस्दै आएका क्षेत्र प्रसाद श्रेष्ठका श्रीमती मिन कुमारी श्रेष्ठ एकाएक फरार भएकी छन। हराएको
गायक नारायण धिताल र गायिका मेलिना राईको स्वरमा रहेको नयाँ गीत भिडियो सार्वजनिक भिडियो हेर्नुहोस !
December 3, 2020 admin समाचार 2148
गायक नारायण धिताल र गायिका मेलिना राईको स्वरमा रहेको नयाँ गीत भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ। ‘झन् झन् माया बढ्यो’ बोलको गीतको भिडियो राजधानी काठमाडौँमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गरेर सार्वजनिक गरिएको हो। संगीतकार तथा प्राज्ञ सुनिल
LEX 18 agenda conversation: Job club (486304)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (458413)
Hello world! (384422)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (351934)